आन्तरिक पर्यटनको आर्थिक महत्व | Hamro Patro
आन्तरिक पर्यटनको आर्थिक महत्व
Bishwa Raj Adhikari - Jun 22 2018
अर्थशास्त्रमा एउटा भनाइ छ, व्यक्ति (धनी) हरूले जति बढी आर्जन गर्छन त्येति नै उनीहरूमा फाल्तु कुरामा खर्च गर्ने गर्ने प्रवृति बढेर जान्छ। यो नाकारात्मक भनाइलाई सकारात्मक किसिमले हेर्यौ। अर्थात पैसा हातमा परे पछि व्यक्तिहरूलाई तो पैसा विभिन्न किसिमले खर्च गरौ गरौ लाग्छ।
धनीहरूको पैसा गरिबहरूसम्म पुर्याउन, रोजगारी श्रृजना गर्न एवं राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित तुल्याउन आन्तरिक पर्यटनको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसैगरी, स्थानीय स्रोतहरूको विकास एवं संरक्षण गर्न आन्तरिक पर्यटनको भूमिका अग्रणी हुन्छ। तर दु:खद यथार्थ त के छ भने हामी कहाँ वाह्य पर्यटनले महत्व पायो तर अन्तरिक पर्यटनले महत्व पाएन। वाह्य पर्यटनले धेरै महत्व पाएको हुनाले नै काठमाडौमा पर्यटन उद्योगको राम्रोगरी विकास भयो। यस सहरमा अवस्थित सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्वका कुराहरू अवलोकन गर्न वर्षेनी हजारौका संख्यमा विदेशीहरू आए। वाह्य पर्यटनबाट काठमाडौका नागरिकहरूले राम्रो आय आर्जन गरे। फ्रेन्च, स्पेनिस, इटालियन भाषा सिकेर ती भाषा बोल्न जानेकोले धेरै व्यक्तिहरू ‘टुर गाइड’ भएर पनि निकै राम्रो आम्दानी प्राप्त गरे। टुर गाइडको आम्दानीबाट घर गृहस्थी चलाए। अर्थात टुर गाइड हुनु पनि एउटा राम्रो आम्दानीको पेशा (रोजगारी) हुन पुग्यो। यस किसिमका उदाहरणहरू धेरै छन।
काठमाडौमा ठूला ठूला होटल एवं पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास भए। तर काठमाडौको तुलनामा अन्य नेपाली सहरहरूमा पर्यटनको विकास शून्य वराबर रह्यो। पर्यटन विकासको लागि ठूलो पूर्वाधार हुँदा हुँदै पनि तराइका दुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल ‘जनकपुरधाम’ र ‘सिम्रौनगढ’ सदा ओझलमा रहे। जनकपुरधाम केही चर्चामा रहेता पनि ऐतिहासिक र राजनैतिक महत्वको स्थल सिम्रौनगढ छायामा पर्यो। किन होला? स्थानीयको सक्रियता पुगेन वा स्थानीय एवं केन्द्र सरकारको? जे होस, तराइका सहरहरूमा पर्यटनको प्रयाप्त विकास हुन सकेन।
के हो आन्तरिक पर्यटन?
अन्य विभिन्न राष्ट्रहरूबाट कुनै राष्ट्र वा राष्ट्रहरूमा विभिन्न व्यक्तिहरू अनेक उद्देश्यका साथ भ्रमणमा आउनु वाह्य पर्यटन हो भने एउटै राष्ट्र भित्रका अनेक स्थानहरूबाट भ्रमण उद्देश्यका साथ त्यस राष्ट्रका विभिन्न स्थानहरूमा व्यक्तिहरू पुग्नु आन्तरिक पर्यटन हो। नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको अवधारणाको विकास धेरै पछि मात्र भएको हो। नेपालमा वाह्य पर्यटनले मात्र महत्व पाएको हुनाले नेपालको पर्यटन उद्योग काठमाडौ-केन्द्रित हुन पुग्यो। ठूला ठूला होटल, सूचनात्मक एवं मनोरञ्नात्मक गन्तव्य स्थल, एवं अन्तरार्ष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलको विकास केवल काठमाडौ-केन्द्रीत हुन पुगे। जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरू उपेक्षित रहे। जबकी प्रत्येक स्थान (जिल्ला) लाई प्रकृतिले केही न केही विशेष महत्वका कुराहरू प्रदान गरेको हुन्छ र छ पनि। बारा जिल्लाले ‘गढीमाई’ पाए जस्तो। मकवानपुर जिल्लाले चिसापानी गढी पाए जस्तो।
नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ डोर्याउन आन्तरिक पर्यटनले उल्लेखनीय भूमिक खेल्न सक्ने भएकोले यस आलेखमा आन्तरिक पर्यटनको आर्थिक महत्वबारे चर्चा गरिने छ।
अर्थशास्त्रमा एउटा भनाइ छ, व्यक्ति (धनी) हरूले जति बढी आर्जन गर्छन त्येति नै उनीहरूमा फाल्तु कुरामा खर्च गर्ने गर्ने प्रवृति बढेर जान्छ। यो नाकारात्मक भनाइलाई सकारात्मक किसिमले हेर्यौ। अर्थात पैसा हातमा परे पछि व्यक्तिहरूलाई तो पैसा विभिन्न किसिमले खर्च गरौ गरौ लाग्छ। त्यो पैसाको प्रयोग उनीहरूले मनोरञ्जन, लुगाफाटो, अन्य किनमेल, घुमफिर (पर्यटन) मा खर्च गर्छन। नेपालको सन्दर्भमा यो भनाइ पूर्णतया लागू हुन नसक्ला। नेपाल वा दक्षिण एशिया क्षेत्रमा पैसा भनेको जसरी पनि जोगाउनु पर्ने र खर्च गर्नु मूर्खता हुने भन्ने धारणा व्याप्त रहेको छ। त्यसैकारण यस क्षेत्रमा व्यापारको राम्रो विकास हुन नसकेको हो। तर विकसित देशहरूमा पैसाको जन्म नै खर्च गर्नका लागि भएको भन्ने धारणा व्याप्त रहेकोले यी मुलुकहरूमा व्यापारको पर्याप्त विकास हुन सकेको हो। तर अव नेपालमा पनि हुनेले पैसा खर्च गर्नु पर्छ भन्ने धारणाको विकास हुन थालेकोले नेपालीहरूले आफूसँग रहेको बचत मनोरञ्जन, किनमेल, घुमफिरमा खर्च गर्न थालेका छन। रोजगारी वा अन्य उद्देश्यका साथ विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालमा बस्ने आफ्ना परिवारहरूलाई पैसा पठाउन थालेकोले नेपालीहरूले पनि विभिन्न किसिमले खर्च गर्न थालेका छन। यस किसिमको परिस्थिति विकासका साथै नेपालमा पनि आन्तरिक पर्यटनको विकासको लागि थप औसरहरू सृजना भएको छ। र यो औसरको अब बलियो किसिमले प्रयोग हुनु पर्दछ। नेपालले आन्तरिक पर्यटन विकासमा जोड दिनु पर्छ।
अहिलेको यो नव परिस्थितिमा, नेपालीहरूमा घुमफिर गर्नु पर्छ भन्ने भावनाको विकास भएको स्थितिमा, तथा वैदेशिक रोजगारीको कारण नेपालीहरूको क्रय शक्ति वृद्धि भएर बढी खर्च गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेको सन्दर्भमा नेपालमा आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थित किसिमले विकास हुने सक्ने सम्भावना चुलिएर गएको छ। अव केवल यो सम्भावना वा औसरको बलियो गरि उपयोग गर्न मात्र बाँकि छ।
आन्तरिक पर्यटनले कसरी स्थानीयको आय वृद्धि गर्छ?
आन्तरिक पर्यटनले स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अनेक औसरहरू सृजना गरेर राष्ट्रिय आय वितरणलाई सन्तुलित पार्ने प्रयास गर्दछ। तर कसरी?
आन्तरिक पर्यटनमा देश भित्र कै अनेक स्थानहरूमा देशबासीहरू मनोरञ्जनात्मक एवं अन्य उद्देश्यका साथ भ्रमणका लागि पुग्छन। यसरी उनीहरू भ्रमणका लागि विभिन्न स्थानहरूमा पुग्दा उनीहरूले यातायातका साधन, होटल, रेष्टुरेन्ट, पसल, सिनेमा हल आदिको प्रयोग (माग) गर्छन। यी सुविधाहरू स्थानीयले आन्तरिक पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराउँदा विभिन्न किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्छ र यसरी विभिन्न किसिमक कार्यहरू गर्दा स्वत: रोजगारी सृजना हुन्छ। अर्थात आन्तरिक पर्यटकहरूले यसरी रोजगारी सृजना गर्छन। स्थानीयको हातमा पैसा पर्ने औसर सृजना गर्छन। विभिन्न स्थानका व्यक्तिहरू विभिन्न स्थानहरूमा पुग्ने र खर्च गर्ने हुनाले विभिन्न व्यक्तिहरूको हातमा पैसा पर्न गएर वा आम्दानीको औसर सृजना भएर राष्ट्रिय आय वितरण कार्य प्रभावकारी हुन पुग्छ वा सन्तुलनतिर अग्रसर हुन्छ। आन्तरिक पर्यटनले गर्दा नै एउटा स्थानको व्यक्ति अर्को स्थानमा पुगेर त्यस स्थानको ग्राहक हुन पुग्छ। आन्तरिक पर्यटन नभएको खण्डमा काठमाडौ वा डडेलधुराको व्यक्तिले बारा स्थित सिमरौनगढ पुगेर विभिन्न सामाग्री वा सेवा खरिद गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन। तर आन्तरिक पर्यटनले गर्दा देशका कुना कुनामा रहेका स्थानहरूमा पनि व्यापारिक औसर सृजना हुने गर्दछ किनभने देशको कुना कुनामा पर्यटकहरू पुग्छन। यो कारणले गर्दा नै आन्तरिक पर्यटनको महत्व बढेर गएको हो।
विकसित देशहरूले वाह्य पर्यटनलाई जति महत्व दिन्छन त्येति नै महत्व आन्तिरक पर्यटनलाई पनि दिन्छन। यो कारणले गर्दा विकसित देशमाहरूमा आन्तरिक पर्यटनको पनि पर्याप्त विकास भएको पाइन्छ।
आन्तरिक पर्यटन केवल मनोरञ्जनका लागि मात्र नभएर व्यापार, नोकरी (पेशा), स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा, तिर्थाटन, खेलकुद आदिको लागि पनि हुने गर्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले आन्तरिक पर्यटनमा निकै जोड दिएको पाइन्छ र यहाँका नागरिकहरूले आन्तरिक पर्यटक भएर निकै समय बिताएको देखिन्छ। यो कारणले होला अमेरिकाको सानो होस वा ठूलो, वा सबै भन्दा सानो सहर किन नहोस, त्यहाँ (सहरमा) बस्नका लागि मोडेल र खानका लागि रेष्टुरेन्ट अवश्य पाइन्छ। ठूला ठूला सहरहरूमा त झन प्रशस्त मात्रामा होटल, मोटेल र रेष्टुरेन्टहरू संचालित रहेको पाइन्छ।
आन्तरिक पर्यटन स्थलको विकास कसरी गर्ने?
प्रकृतिले दिएको रमणीय स्थल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, प्रचीन संस्कृति आदि आदि आन्तरिक पर्यटकको लागि गन्तव्य हुन सक्छन नै, साथै थप कुराहरु गरेर पनि आन्तिरक पर्यटकको गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। एउटा त्यस्तै गन्तव्यको चर्चा गर्नु यहाँ सान्दर्भिक होला।
सुंक्तराज्य अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको मायामी सहर नजिक रहेको एक सहर ‘कि वेस्ट’ पनि आन्तरिक पर्यटकको लागि राम्रो गन्त्व्य हुन पुगेको छ। त्यस्तो हुनुको दुई कारण हरू छन। पहिलो त यो सहरबाट अमेरिकाको छिमेकी मुलुक क्युवा मात्र ९० माइल टाढा छ। अर्थात यो सहर अमेरिकाको छिमेकी राष्ट्रको सबै भन्दा नजिकको सहर हो। दोस्रो, प्रख्यात अमेरिकी उपन्यासकार अर्नेष्ट हेमिंगवेको घर पनि, जसलाई अहिले सङ्ग्राहालय बनाएएको छ, यसै सहरमा छ।
आन्तरिक पर्यटनलाई बल पुर्याएको कि वेस्ट सहर स्थित हेमिंगवेको घरको बारेमा छोटो चर्चा गरौ। यो सहरमा स्थित हेमिंगवेको घर अवलोकन गर्न विदेशबाट हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरू आउँछन नै, साथै अमेरिका भित्रबाट पनि हजारौंको संख्यामा व्यक्तिहरू हेमिंगवेको घर अवलोकन गर्न पुग्छन। यसरी हेमिंगवेको घरलाई सुन्दर र आकर्षक गन्तव्य तुल्याइएको छ। अन्तरिक पर्यटनको एक बलियो माध्यमा बनाइएको छ। अर्थात यसरी पनि, प्रख्यात व्यक्तिको घरलाई पनि, आन्तरिक पर्यटनको एक राम्रो गन्तव्य बनाउन सकिन्छ।
नेपालको तराइ (मधेस) क्षेत्रमा पनि, आन्तरिक पर्यटयका लागि विभिन्न गन्तव्यहरू बनाउने सन्दर्भमा, खास गरी वीरगंजमा ‘विद्यापति’, ‘चित्रगुप्त’ वा यस क्षेत्रका चर्चित व्यक्तिहरूको घर वा जीवन, शैली वा परिचयलाई नै पनि अन्तरिक पर्यटकको लागि गन्तव्य बनाउन सकिन्छ। यस्तो गरेर स्थानीयहरूको लागि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ। आय वृद्धि गर्न सकिन्छ। तर गर्नु पर्यो।